Dekada Boosaaso - Wikipedia
Dekadda Boosaaso (Af Ingiriis : Port of Bosaso iyo Bosaso Port) waa dekada rasmiga ah ee magaalada Boosaaso, taasi oo u adeegta howlaha maamulka Puntland. Dekadani waxay ka mid tahay kuwa ugu weyn ee mashquulka badan Soomaaliya. Warbixin ay sii daysay Idaacada BBC waxaa lagu sheegay in Dekeda Boosaaso tahay tan koowaad ee xoolaha Soomaalida laga dhoofiyo.
Port of Bosaso
Wasaaradda Dekedaha, Gaadiidka Badda Iyo La dagaalanka Burcad badeeda ee Puntland.
Wadanka Soomaaliya waxay leedahay xeebta ugu dheer qaarada Afrika, taasi oo u suurtogelisay ineey yeelato tiro badan dekado ah. Si kastaba ha ahaatee, dekadaha ugu waaweyn ee si xoogan uga shaqeeya wadanka Soomaaliya waxaa ka mid ah:
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Dekada_Boosaaso&oldid=192785"
Last edited on 16 Juun 2019, at 17:28
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 16 Juun 2019, marka ee eheed 17:28.